Hevitra, torolàlana, fisaintsainana ary hevitra momba ny boky - Ikkaro
firosoana >> boky
Eto dia miresaka momba ny boky isika. Nojereko izy ireo, nasiako hevitra momba azy ireo, notehiriziko ireo an-tsoratra, ireo lohahevitra nasongadiko. Ireo fanamarihana ataoko momba ireo zavatra tiako tadiavina mba hizaha na hianarako bebe kokoa ary mampifandray amin'ny sisa amin'ny tranonkala aho.
Manasongadina hevitra sy lohahevitra mahaliana vaovao aho. Boky teknika izy ireo ary koa sanganasa, fitantarana na tononkalo aza.
Dingana 2 amin'ny tetikasa
Amin'ity fizarana vaovao ity dia ampidiriko ny tetik'asa manokana nananako tamina boky, haisoratra ary fisaintsainana. Nantsoina hoe Ny Nosy Gont ary tohizako eto izany. Tamin'ny tetik'asa taloha dia nametra ny tenako tamin'ny lohahevitra literatiora bebe kokoa aho.
Ankehitriny dia ho hafa kely ny fomba fiasa ary hasiako fanasongadinana ireo lafiny rehetra izay heveriko fa mahaliana ary raha azoko atao dia hampifandraisiko amin'izy ireo amin'ireo lohahevitra rehetra iarahanay miatrika. Tsy ho fanontaniana literatiora fotsiny io.